မြင်ရခဲသည့် လျှပ်တပြက်ဓာတ်ပုံ (၂၈) ပုံ - ONE DAILY MEDIA
ဇောက်ထိုးမိုးတိမ် (သို့) ရှားပါးအဝါရောင်ဖရဲသီးကိုသင်တွေ့ဖူးပါသလား ?? ယခုတင်ပြမယ့် ပုံများကို မြင်ပြီးရင်တော့ ကင်မရာတီထွင်ခဲ့သူနဲ့ အံ့သြဖွယ်ပုံတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝေမျှခဲ့သူတွေကို သင် ကျေးဇူးတင်နေပါလိမ့်မယ်။
ယခုဖော်ပြပေးမှာတွေက ချိန်သားကိုက် ရိုက်ခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှားပါး ဓာတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) နာနတ်သီးပင်ပေါက်လေးသဖွယ် သစ်စေ့
(၂) မှန်ပေါ်မှာအနားယူနေတဲ့ အစိမ်းရောင်ဖားလေးတစ်ကောင်ပါ
(၃) မယုံနိုင်စရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် အစုအဝေး
(၄) တညီတညာတည်း ကျိုးပဲ့သွားသော ဝိုင်ခွက်
(၅) နောက်ပြန်ရေတွက်နေသော ဒိုင်ခွက်ဂဏန်များ
(၇) အလှပဆုံး ကြက်သွန်ဖြူဥ
(၈) မေလမှာ တွေ့ရသော တရုတ်နိုင်ငံမှ နှင်းခဲ များ
(၉) နေရောင်အောက်မှ သွေးကြောများ
(၁၀) စကာပေါက်သဏ္ဍာန် ပူစီဖောင်းများ
(၁၁) တံခါးညှပ်သော်လည်း လှပနေဆဲ လက်သည်းခွံ
(၁၃) ရေလှိုင်းလား လေမုန်တိုင်းလား
(၁၄) ဘာလီမှ စပါးစိုက်ခင်းများ
(၁၅) မြူများဖုံးပြီး လေပေါ်ပျံဝဲနေသည့် သင်္ဘောသဏ္ဍာန်တူနေသော ဆန်ဖရန်စ္စကိုမှ The Sutro Tower
(၁၆) ရေခဲပြင်အောက်မှ နစ်မြုပ်သင်္ဘော
(၁၇) Mammatus ဟုခေါ်သည့် တိမ်တိုက်များ
Mammatus တိမ်များဟာ ပိုကြီးသော cumulonimbus တိမ်များ၏ အောက်ခြေဘက် ဖြစ်ပါတယ်။cumulonimbus cloud တွင်လှိုင်းများရှိနေခြင်းက mammatus တိမ်များဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Mammatus သည် အခြေခံအားဖြင့် ဇောက်ထိုး လှန်ထားသောတိမ်တိုက် ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်ဖရဲသီးနှင့် တူညီသောအရသာရှိသည့်အမျိုးအစားကွဲတစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၉) ဒီ pizza ကိုတော့ သင်မကြိုက်လောက်ပါဘူး
(၂၀) သက်တံ့၏ ရောင်ပြန်အကွက်ငယ်
(၂၁) လက်မောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ Praying Mantis အသေးစား
(၂၂) ဖြူကောင်ငယ်လေးသဖွယ် Pain au chocolat
(၂၃) စတော်ဘယ်ရီပင် အရွက်လေးများပေါ်မှ ရေသီးလေးများ
(၂၄) ငှက်တစ်ကောင်သဖွယ် ရေမျောကမ်းတင် သစ်သားချောင်း
(၂၅) အတွဲများသာ လမ်းကူးရန် 😛
(၂၆) မျဉ်းတန်းတစ်ခုအလား ညီညာနေသောဘီယာခွက်များ
(၂၈) ဖရဲသီးအရွယ် ဧရာမသံပရာသီး
ဒီပုံတွေထဲကဘယ်ပုံကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ ?? သင့်ထင်မြင်ချက်တွေကိုလဲ ဝေမျှပေးခဲ့ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။